"50 မှောင်မိုက်အရောင်များ" အတွက်နောက်တွဲယာဉ်သည်မက်ဒရစ်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံဖြည့်ရန်ဖြစ်သည် eReaders အားလုံး
« ၅၀ မှောင်မိုက်သောအရိပ်များ»အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကမက်ဒရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်
သုံးဆယ့်သုံးဆယ့်သုံး မီးခိုးရောင်၏အရိပ် 50နောက်ပိုင်းတွင်ထူးဆန်းသော်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့်စတုတ္ထမြောက်စာအုပ်သည်နောက်ဆက်တွဲစာအုပ်၏ဒုတိယစာအုပ်အပေါ်အခြေခံထားသည့်ကြေညာချက်နှင့်အတူပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အရိပ် 50 မှောင်လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တရားဝင်ကြေငြာထားသည် နောက်ထပ်ဘာလဲ ယခုခေတ်မက်ဒရစ်တွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့်တရားဝင်နောက်တွဲယာဉ်ကိုပြသခဲ့သည်.
ထို့အပြင်မက်ဒရစ် Callo ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် EL James Saga ၏ပရိသတ် ၃၀၀ ကျော်စုရုံးလာကြပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်တော့မည့်ရုပ်ရှင်၏နောက်တွဲယာဉ်သေးကိုသာတွေ့နိုင်သည်။
ဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် သန်းကြွယ်သူဌေး Christian Grey နှင့် Ana Steele တို့အကြားစွန့်စားခန်းပြဇာတ်ရုံများသို့ပြန်ခြင်းသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောနေ့၌ဖြစ်ပွားလိမ့်မည် ဒါမှမဟုတ် Valentine Day မှာအတူတူပါပဲ စုံတွဲများစွာ၏အစီအစဉ်အများစုသည်မီးခိုးရောင်အရိပ် ၅၀ နှင့်ရုပ်ရှင်အသစ်၏ Premiere တို့ဖြင့်လည်ပတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးကြည့်ကြပြီး၎င်းသည်အနည်းဆုံးပထမဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်အတူတူပင်အောင်မြင်မှုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့သီးသန့်၏ပိုစတာကိုတင်ပြ # FiftyShadowsMore။ မနက်ဖြန်နောက်တွဲယာဉ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပစ်လွှတ်မှု။ pic.twitter.com/x2WRiqXEe6
- Universal ရုပ်ပုံများ (@UniversalMX) စက်တင်ဘာလ 12, 2016
ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်၌ပါ ၀ င်သည့်ဇာတ်ဝင်ခန်းအဆုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအသစ်များရရှိပြီးဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ရိုက်ကူးရေးကိုရပ်တန့်ရန်ပြီးနောက်သရုပ်ဆောင်များနှင့်အသံဖမ်းအဖွဲ့သည်တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒီတုန်းကသူတို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့နိုက်စ်မှာနေတယ်။
Shades Darker (၅၀) ဖြန့်ချိမှုကြောင့်သင်စိတ် ၀ င်စားသူများစွာထဲကတစ်ယောက်လား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » « ၅၀ မှောင်မိုက်သောအရိပ်များ»အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကမက်ဒရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်
iClassics - လူအများအံ့အားသင့်စေခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုတစ်ခု
Booken သည် Cybook Ocean အတွက်ဆိုလာပြားများနှင့်အတူအမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်